Kuzovulwa iziteshi ezintsha zama-phoyisa | News24
Kuzovulwa iziteshi ezintsha zama-phoyisa
Amaphoyisa aseHillcrest entshonalanga yeTheku, azovula iziteshi ezincane zama phoyisa, eMolweni kwaNyuswa nakwaNgcolosi nasezindaweni ezisondelene nazo.
Okhulumela ama phoyisa ase Hillcrest, u-Leiutenant MF Mkhize, uthe umbono wokuvula lezi ziteshi zamaphoyisa kulezizi ndawo uqhamuke nabaholi bomphakathi njenga makhansela, izinduna namakhosi.
Uthe: “Siba nemihlangano namakhosi, izinduna namakhansela njalo ngenyanga sidingida izindaba zomphakathi nezinhelo zentuthuko, kwase kuvela ukuthi kunga kuhle kuvulwe izitseshi zamaphoyisa eMolweni, kwaNyuswa nakwaNgcolosi,” usho kanje.
Ukhale ngokuthi umphakathi oqhamuka kule zindawo unenkinga yokkufinyelela esiteshini samaphoyisa eHillcrest uma udinga usizo amaphoyisa.
“Umphakathi ovela kulezindawo,” kuqhuba yena, “ubona kunzima ukufinyelela esiteshini sama phoyisa aseHillcrest ngoba kukude. Amanye amalungu omphakathi awasebenzi njengoba kudingeka agibele uma eya e-Hillcrest. Amanye asemadala ukuthi angahamba ibanga elide ngezinyawo.
“Le nkinga isidale ukuthi abantu bangakwazi ukuthola usizo abalundingayo emaphoyiseni,” kusho yena.
Bahlanganise amakhanda bengama phoyisa ase Hillcrest babuka nendlela ubugebengu osebudlange ngayo eMolweni nakwaNyuswa, babona sidingeka ngokuphuthuma isiteshi sama phoyisa.
Uqhube wathi ngendlela ubugebengu obudlange ngayo kulezizi ndawo, kwenye inkathi imibiko yamacala enzeka emphakathini abayitholi ngoba abantu banqena ukuhamba ibanga elide.
Uthi eminyakeni emihlanu edlule kunamacala angakaze abikwe emaphoyiseni okubalwa awokweba, ukuntshontshwa kwezimoto nezidakamizwa.”
Uqhube wathi: “Amalungu omphakathi asezokwazi manje ukubika wonke amacala enzekayo ezindaweni ahlala kuzo, futhi sizo qinisekisa ukuthi lawo macala ayaphenywa ngendlela efanele,” Kusho yena.
Uthe isiteshi sokuqala esizovulwa sizoba seMolweni ngoba iyona ndawo eyabhalisa kuqala.
“Kunendawo esayithola eMolweni eyayivele inesakhiwo esingasetshenziswa muntu.
Into edingekayo khona ukuthi silungiswe, sibiyelwe bese sifaka ama-container okuzo setshenzelwa kuwo, kepha asikabi nalo usuku esizovulwa ngaso kepha abantu abalidele ngabomvu.”
Uthe kuzolandela izindawo zakwaNyuswa nakwaNgcolosi, kodwa basabheka indawo yokufaka lama-container okusebenzela.
Uthe balinde indawo enesakhiwo nje, noma abangayinikezwa wuMasipala, bese beyaqala ukusebenza.
Uma kuhamba isikhathi eside bengayitholi indawo, bazo faka ama-container kuphela basebenzele kuwona. Unxuse umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa, uwethembe.
Uthe: “Uma kune sakhiwo esingahlali munu kwaNyuswa, sinxusa umnikazi waso asithinte ngocingo emaphoyiseni aseHillcrest sibonisane ngokuqala isiteshi ngokushesha,” kusho yena.
UMnuz Blessing Nzama, oyilungu lomphakathi eMolweni ukhombise ukujabula ngenkathi ezwa ukuthi sekuzoba nesiteshi sama phoyisa esise duze nekhaya lakhe. Uthe: “Besihamba ibanga elide uma sifuna ukubika icala emaphoyiseni aseHillcrest. Kwenye inkathi ngangibala imali engizogibela ngayo, nebanga engizolihamba, ngivele ngidikibale ngingabe ngisaya ukuyo bika icala futhi nezigebengu bezazi ukuthi ziyazenzela kule ndawo.
Uqhube wathi: “Ngiyajabula ngoba konke lokhu sekuzophela, sihlale endaweni ephephile,” kusho yena. ma.
Uma kukhona othanda ukuxhasa loluhlelo lokuvula iziteshi zamaphoyisa eMolweni, kwaNyuswa nakwaNgcolosi, angashayela kule nombolo yogcingo ethi 031 765 9124.